Izakhelo zesakhelo seShopify: Amaphepha eWebhu akwiSakhelo aBalaseleyo eShopify | Creatives Online
UNerea Morcillo | | Izibonelelo, itemplates
Ngokufika kwe-e-commerce, Abasebenzisi abaninzi kufuneka bahlaziye inkangeleko yeshishini labo ukuze bakhulise ukukhula kunye nokutsala inani elikhulu labalandeli.
Kule post, hayi kuphela Siza kukucacisela ukuba yintoni le malunga Shopify, ukuba awukayiva. Kodwa kwakhona, siza kukubonisa amanye awona maphepha ewebhu angcono, apho unokufumana khona iitemplates ezingapheliyo, ngenjongo yokukwazi ukucwangcisa ngcono ishishini lakho kwaye wenze inkangeleko ibe nomdla ngakumbi.
Apha sicacisa ngakumbi malunga neShopify.
0.1 Yintoni Shopify
1 Iiwebhusayithi zeetemplates
1.1 hleka kakhulu
Sichaza uShopify njengohlobo lwentengiso ye-elektroniki, oko kukuthi, yindawo efanelekileyo ukuba le nto uyifunayo ukwakha ishishini lakho kwi-intanethi okanye ivenkile ebonakalayo. Iivenkile ezisebenza kwi-intanethi, oko kukuthi, kwi-intanethi, zisebenzisa esi sixhobo kuba sikuvumela ukuba uthengise zombini kwi-intanethi ngeyakho iwebhusayithi kunye / okanye ngokobuqu Shopify.
Ke uShopify ngumakhi wewebhusayithi ye-ecommerce enokukhetha wonke umntu ukusuka kwabaqalayo ukuya kwiingcali ze-ecommerce. Ukuba uqhelene no-Etsy, uya kuqalisa ukuqhelana ngakumbi nesi sixhobo.
Ungabhalisela uvavanyo lweentsuku ezili-14 lweShopify ukuze uzizamele ngokwakho. Ngexesha lovavanyo lwakho, unokwenza ivenkile yakho ye-intanethi, zama usetyenziso lwasimahla lwe-Shopify, kwaye wenze intengiso yakho yokuqala. Amaxabiso eShopify aqala kwi-9 yeedola ngenyanga ukuba usebenzisa isicwangciso esiLite. Nangona kunjalo, uninzi lweevenkile ezikwi-Intanethi ziqala ngeSicwangciso esisisiseko se-Shopify yeedola ezingama-29 ngenyanga. Ukuba sele unamava okuqhuba ishishini, ungakhetha uShopify Advanced okanye Shopify Plus ngokweemfuno zeshishini lakho.
Into abantu abambalwa abayaziyo yileyo esi sixhobo sibonelela ngomlawuli ekubonelela ngolwazi oluneenkcukacha malunga nokusebenza kunye nokukhula kwevenkile yakho. Enkosi koku, unokuba usexesheni kunye nazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze ivenkile yakho iqhubeke nokushukuma rhoqo.
Shopify inikeza umxholo wasimahla elayishwa ngokuzenzekelayo kwivenkile yakho ye-intanethi, onokuthi uyilungise ngayo nayiphi na indlela oyifunayo. Oku kugqibelele kwabaqalayo abafuna ukuvavanya ukuba isebenza njani iqonga leShopify kwaye babone ukuba ngawaphi amathuba abo okuphumelela. Ngamanye amazwi, unenkululeko yokwenza iwebhusayithi yakho ilungelelanise nesitayile sophawu lwakho. Unokukhetha kwakhona iifonti zasimahla, utshintshe iskimu sombala, yongeza ezakho iifoto, njl.
Shopify uhlala efini, Oku kuthetha ukuba ungalawula ishishini lakho ngokulula.
Ngamafutshane, esi sixhobo sikunceda wenze uyilo kunye nenkangeleko yevenkile yakho ngokusebenzisa imixholo eyahlukeneyo onokuthi uyiguqule okanye uyitshintshe ngendlela othanda ngayo. Kwaye kwakhona ikunikeza ukusetyenzwa kwentlawulo, ekuvumela ukuba wamkele kwaye ufumane iintlawulo zeemveliso ozithengisayo. Sisixhobo esifanelekileyo ukuba ucinga ngokuvula ishishini elikwi-intanethi kwaye awukazi ukuba uqale phi.
Nazi ezinye iiwebhusayithi onokufikelela kuzo ukufumana iitemplates.
Umthombo: Urban Tecno
Ezinye zeewebhusayithi ezilungileyo zokufumana iitemplates zezi:
Ukuba uza kuseka ivenkile eyehlayo yempahla okanye izixhobo, umxholo wakho nguHooli. Uyilo lweHooli luyavuya kwaye lunemibala, ejoliswe kwiivenkile eziqhelekileyo kunye nezonwabileyo. Le template ye-Shopify ineedemos eziyi-10 ezicwangcisiweyo onokuthi uzisebenzise kwiphepha lakho lasekhaya. Kodwa nokuba unokhetho oluninzi, awuyi kuba nangxaki yokwenza umxholo ulungele wena, kuba ungakwenza oko ngokukhetha iinketho kwiqela loqwalaselo. Enye into esisiseko luyilo lwayo oluphendulayo, ebonakala ngokugqibeleleyo kuzo zonke iintlobo zezikrini kunye nezixhobo.
IHooli ikwabandakanya ezi zinto zilandelayo:
Uluhlu lweemveliso ezifunekayo.
Okupoqayo kunikezelo olubonakalayo.
Imigaqo-nkqubo yevenkile ye-Intanethi ngokuhambelana nomthetho wangoku kunye nokulungelelaniswa nemigaqo ye-RGPD.
Iimbono ezikhawulezayo zeemveliso.
Iikhonkco kwiimveliso zangaphandle.
Izinto zokubala zemveliso.
Jonga iimveliso ngemifanekiso ye360º.
Yongeza izinto kwinqwelo ngaphandle kokushiya iphepha usebenzisa i-AJAX.
Ilula, i-Website yethempleyithi ye-Shopify, ilungile ukuba usaqala kwilizwe le-ecommerce kwaye awuyazi ukuba zenziwa njani iisetingi eziphambili ze-Shopify. Le template ecocekileyo kakhulu, yakhiwe usebenzisa ibar esecaleni yokukhangela, enemenyu enkulu kunye neemveliso ezininzi zesampulu. Unokwenza ngokwezifiso uthotho lwezinto ezinje ngephalethi yombala, uhlobo lohlobo lwenkampani, uphawu lwakho kunye nesimbo somxholo.
Imisebenzi yayo ephambili ibandakanya:
Imenyu yeAccordion kwibar esecaleni.
Modo yenza nkulu ukushukuma phezu kweemveliso.
Icandelo leemveliso ezicetyiswayo.
Imifanekiso eshukumayo ngeziphumo ezinomdla kwiphepha ngalinye lemveliso.
Yongeza kwinqwelo ngaphandle kokushiya iphepha usebenzisa iteknoloji ye-AJAX.
Amaqhosha ukwabelana kwiintanethi zentlalo.
Isikrini sentlawulo yomntu ngamnye kunye neetekisi zakho.
Ukuba uthengisa iimveliso eziphucukileyo ezinxulumene nefashoni, umhombiso, ubucwebe, izixhobo zokunethezeka, njl. Udinga itemplate ngokohlobo lwemveliso oza kuyithengisa. Emva koko, Olona khetho lungcono yiBarberry, i-minimalist, ebukekayo, engaphantsi kunye ne-avant-garde ye-Shopify theme.
Ezona zinto zibalulekileyo kule template ye Shopify zezi:
Imodyuli ithengiswa kwiimali ezahlukeneyo.
Ukulayishwa ngokuqhubekayo kwemifanekiso.
Umbono okhawulezayo wemveliso.
Ukubala ukunciphisa ukuba semthethweni kwezibonelelo zakho.
Zizonke iimveliso ezithengisiweyo.
Ifomu yesaziso kwakhona impahla.
Isikhethi sombala kunye nobungakanani.
Yongeza kwiqhosha lenqwelo ngeteknoloji ye-AJAX.
Imibhalo engasentla kwekhasi enokwahlulwa ngabanye.
Ukuba ngazo zonke iitemplates zeevenkile ezikwi-intanethi esikubonisileyo ukuza kuthi ga ngoku ucinga ukuba awunakufezekisa ubungakanani bomntu ngamnye, sicebisa ukuba ubeke ingqalelo kuba UAvone une malunga 1.000 iinketho zoqwalaselo.
Le template yeShopify ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso la macandelo alandelayo:
Yila amaphepha apheleleyo.
Guqula imibhalo engasentla kwekhasi.
Lungelelanisa okusezantsi kwiimfuno zakho.
Guqula yonke imibala oyifunayo.
Sebenzisa olona lwimi luhambelana nesazisi sakho senkampani.
Ukwanayo needemos eziyi-20 ezicwangcisiweyo kwaye kwinyathelo elinye, unokuba nephepha lakho lasekhaya lisebenze. Kwaye ukuba ukhetha ukunamathela kwiinketho ezicwangcisiweyo, uneentlobo ezili-10 ezahlukeneyo zephepha levenkile, izitayile zentloko ezili-10, iintlobo ezisi-8 ezahlukeneyo zamaphepha emveliso, njl.
Njengemisebenzi eyongezelelweyo, oku kulandelayo kuyabonakala:
Okupoqayo ukufumana ababhalisile bakho newsletter.
Izihluzo zazo zonke iintlobo.
Gqibezela ngokuzenzekelayo kwiibhokisi zokukhangela.
I-Basel ikuvumela ukuba uqwalasele ivenkile yakho yonke ngokusebenzisa umakhi obonakalayo obonakalayo isebenza ngokusekelwe tsala kwaye uwise iibhloko. Ngaloo ndlela, unokubonisa kakhulu nantoni na oyifunayo kwiphepha lakho. Ukwenziwa ngokwezifiso ekufuneka kuhambelane nesazisi sakho senkampani, kwaye oko kuhlala kuhamba kakhulu kunokukhetha ipalethi yombala kunye nokufaka ilogo.
Kodwa ukuba ufumanisa kunzima ukulungelelanisa itemplate ukuze ihambelane nawe, ungakhetha phakathi kweedemos eziyi-30 ezicwangcisiweyo kwiphepha lakho. Ikhaya. Kwaye eyona nto intle yile izikimu zemibala azinamda, ke unokuhlengahlengisa umxholo wakho wakwaShopify kuyo nayiphi na ipalette.
I-Basel ikwagqamile kolu khetho lulandelayo ilubandakanyayo:
popups ukujonga ngokukhawuleza iimveliso.
Ubungakanani kunye nesikhethi sombala.
360º umbono wemifanekiso yemveliso nganye.
Iqhosha lokuthenga ngokukhawuleza, ukubeka ii-odolo kwi-thumbnail yeemveliso.
FAmacandelo atyebileyo aphucula i-SEO yevenkile yakho.
IFoxic yenye yezo Shopify iitemplates ezihambelana ngokupheleleyo ne-Oberlo. Esi sixhobo siyakuvumela seta ivenkile yanamhlanje, enoyilo olucocekileyo noluncinci, oko kuya kusebenza ngokugqibeleleyo kunye namaqonga aphambili okwehla kunye neemarike.
Esi sixhobo yiwebhusayithi yetemplate eguquguqukayo kakhulu, ngoko iya kukhonza phantse nayiphi na i-niche onokucinga ngayo. Kwaye unokwenza uyilo lwevenkile yakho ngendlela othanda ngayo, kuba ineedemos eziyilwe kwangaphambili ezingama-40 ukwenza enye Ikhaya elungiselelwe ngakumbi kwiimfuno zakho, kunye namaphepha ahlukeneyo ali-10 kumaphepha emveliso. Kwaye unezitayile zamaphepha ezisi-8 ezahlukeneyo zeengqokelela zakho kunye neefomathi ezisi-8 ezahlukeneyo zebhlog, nto leyo eyenza ukuba idigri yokuzenzela umdla kakhulu.
Ezona mpawu zibalaseleyo zibandakanyiwe kwiFoxic zezi:
Iqhosha elilungisiweyo lokongeza kwinqwelo.
Izihluzi zokukhangela ezikwinqanaba eliphezulu.
Izixhobo zokubala zokubala ezinemida yexesha lonikezelo kunye nezaphulelo.
Ekugqibeleni, enkosi kwezi zixhobo, inyani yokuyila ishishini okanye ivenkile ye-intanethi isesandleni sethu. Kwakhona sifumana iziza ezifana ne-Supply, Porto, Kalles, Apparelix okanye Ella, apho unokuqhubeka nokukhangela iitemplates ezikuvumela ukuba uphucule ishishini lakho.
Siyakumema ukuba uqhubeke nokufumanisa ngakumbi ngesi sixhobo, kwaye uqalise i-adventure yokuyila ishishini lakho kwaye ulise phezulu.
Ngaba sele uqalile ukuyila ishishini lakho elitsha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Shopify iitemplates
Iinkqubo zoyilo lwegraphic